- မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆတွေကို အမှတ်မှားပြီး စိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာတွေ၊ မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆတွေကို ခံစားပြီး စွဲလမ်းမိလို့ စိတ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ အကျဉ်းအကျပ်ထဲက ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ စိတ်အဆင့်။
- မိမိစိတ်ကို နှောင့်ယှက်နေတာ မိမိတွေးနေတဲ့ အတွေးကြောင့်ပဲဆိုတာကို သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ စွဲလမ်းမိခဲ့တဲ့ အတွေးစိတ်ကို အာရုံအဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ပြီး ဖြတ်တောက် စွန့်လွှတ်နိုင်ခဲ့လို့ သက်သာသွားတဲ့ စိတ်အဓိပ္ပာယ်။
- စိတ်ကိုစောင့်ကြည့် သိမှတ်တဲ့နေရာမှာ သိရုံပဲသိနေပါ။ သိခြင်းအပေါ်မှာ မသာယာပါနဲ့။ သိစရာအာရုံနဲ့၊ သိမှတ်နေတဲ့ အသိတွေ ဆက်တိုက် ချုပ်ငြိမ်းနေတဲ့သဘောကို အသိဉာဏ်က အဆက်မပြတ် သိပေးနေတဲ့ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းဟာ အနှစ်ချုပ်စိတ်အသိပဲ။
- အပေါ်ယံ အသေးအမွှားအဆင့်သာရှိတဲ့ စိတ်အနေအထား။ အပေါ်ယံသာ စိတ်ဝင်စားဟန်ပြတတ်တဲ့ စိတ်အနေအထား။ လေးနက်မှုမရှိတဲ့ ပါးပါးလှပ်လှပ် စိတ်သဘောမျိုး။
- အလုပ်ကြီးကြပ်သူရှေ့မှသာ အလုပ်လုပ်ပြချင်ယောင်ဆောင်ပြီး၊ စစ်ဆေးသူ မရှိတော့တာနဲ့ အချောင်ခိုတတ်တဲ့ စိတ်အနေအထား။
- စိတ်ထဲမှာ မှန်းထားတာ သုံးရက်နဲ့ပြီးရမယ်။ ခုတော့ ငါးရက်ဖြစ်နေပြီ။ ဆက်လုပ်လို့ အကျိုးရှိမလား၊ မရှိနိုင်တော့ဘူးလား။ အကျိုးမရှိတာ သေချာရင် မလုပ်တော့ဘူး။ သေချာမှုရှိတယ်၊ မရှိဘူးဆိုတဲ့ အဖြေကို သိချင်တယ်။ သိချင်နေတဲ့ အသိကို သိပေးရမယ့် အသိက ခုချက်ချင်း အဖြေပေးလိုက်! စိတ်ချင်း စိတ်ချင်း အတိုက်အခံလုပ်ပြီး အဖြေတစ်ခုထွက်အောင် အားထုတ်နေတဲ့ စိတ်ပြိုင်ပွဲ။
- တစ်ခါတလေ ဘ၀အပြောင်းအလဲအတွက် ဘ၀နဲ့ချီပြီး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ သေရင်မြေကြီး၊ ရှင်ရင် ရွှေထီးပေါ့ကွာ! လို့ စိတ်ချင်း စိန်ခေါ်စိတ်။ ကဲ! ငါတော့သွားပြီ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတွင်းမှာ ပြန်မလာရင်တော့ သေပြီလို့သာ သဘောထားပြီး သပိတ်သွတ်လိုက်တော့! ဆိုတဲ့ စိတ်ချင်း စိတ်ချင်း စိန်ခေါ်မှု အပြင်းစားစိတ်။
- “ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီး ဆုံးမပြောဆိုစရာ မလိုတော့အောင် သဘောပေါက်သွားပြီ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းဘောင်ထဲက ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ထွက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး” လို့ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားတဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။